Apple Music dia mandoa vola bebe kokoa handraisana orinasa mihoatra ny Spotify | Vaovao IPhone
Ny tena fandavana ataon'ny tompon'ny zon'ireo mpanakanto manoloana ny famerenana amin'ny alàlan'ny serivisy toa ny Apple Music na Spotify dia ny vola azony. Satria aza manao hadisoana, ny hany zavatra tadiavin'izy ireo dia ny manitatra ny paosiny hatrany. Na izany aza, be ny fitsikerana an'i Apple tamin'ny fanombohana ny Apple Music nomena noho ny fahafaha-manelingelina na faneriterena ireo orinasam-pandraketana handoa azy ireo kely kokoa. Na izany aza, araka ny vaovao farany, Apple Music dia mandoa be ny mpanakanto mihoatra noho ny serivisy toa ny Spotify.
Izy io dia ekipa mpikaroka ao Ilay Trichordista iza no nanatsoaka hevitra fa mandoa vola be kokoa i Apple hanoratra orinasa sy mpanakanto noho ny fifaninanana mivantana, Spotify. Ary izany ve ny orinasa Cupertino dia mandoa $ 0,00735 isaky ny famerenana hira iray amin'ny Apple Music. Mandritra izany fotoana izany, Spotify dia manome tambin-karama 0,00437 dolara isaky ny reproductions, izay efa ho antsasaky ny antsasany. Amin'izany fomba izany dia nopotehina ilay angano nateraky ny blonda volamena (Taylor Swift) izay niampanga an'i Apple ho mampiasa tsy fetezana amin'ny resaka fanjakan'ny mpanjaka, na dia taty aoriana aza io vehivavy io ihany no hiafara amin'ny fanaovan-tsonia ny fifanarahana fifanarahana mozika lehibe indrindra Music.
Raha fintinina, Apple Music dia mbola vitsy an'isa, ary tsy mamokatra afa-tsy 13,35% amin'ny vola miditra mifanaraka amin'ity karazana fampielezam-peo ity. Mitariho amin'izay Spotify, izay miteraka 69,57% amin'ny vola miditra, fitomboana efa ho 7% amin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taon-dasa. Mitohy ny fahasalaman'ny Spotify, raha Apple Music kosa, na iza na iza izy, dia nijanona tamina mpampiasa maromaro toa tsy nitombo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » maro » Apple Music dia manome marika mihoatra ny Spotify
Hamado Music, mpilalao mozika avy amin'ny rahona